Ubuninzi beNtsholongwane yokuKhusela i-Pox I-Attenuated Lyophilized Live China Manufacturer
I-Varicella yeMpilo yokuQala,I-Varicella ixesha elide lokuViniseka kweMithi,I-Varicella ixesha elide lokuViniseka
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: I-Varicella yeMpilo yokuQala,I-Varicella ixesha elide lokuViniseka kweMithi,I-Varicella ixesha elide lokuViniseka
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Bulk Final > Ubuninzi beNtsholongwane yokuKhusela i-Pox I-Attenuated Lyophilized Live
Ubuninzi beNtsholongwane yokuKhusela i-Pox I-Attenuated Lyophilized Live
 Ubuninzi beNtsholongwane yokuKhusela i-Pox I-Attenuated Lyophilized Live
Iziphumo ezincinci zingabandakanya intlungu kwisayithi ye-injection, i-fever, ne-rash. Imiphumo emibi kakhulu ayinqabile kwaye iyenzeka ikakhulu kulabo abanomzimba omzimba omzimba . Ukusetyenziswa kwayo kubantu abane- HIV / AIDS kufuneka kwenziwe ngokunyamekela. Akukhuthazwa ngexesha lokukhulelwa ; Nangona kunjalo, amaxesha ambalwa anikezelwa ngexesha lokukhulelwa kungekho ziphumo. Isitofu sokugonya siyafumaneka okanye ngokwaso kunye nesigxina se- MMR , kwinguqu ebizwa ngokuba yi- MMRV . Yenziwe kwintsholongwane ephosakeleyo .
Inkukhu yokukhusela i-inkukhu yaqala ukuba yintengiso ngo-1984. Kuloluhlu lweeMpilo zoLuntu oluPhambili lweeMpilo , amayeza asebenzayo kunye nokhuseleko olufunekayo kwinkqubo yempilo . E-United States ixabisa phakathi kwe-100 ne-200 USD.
Related Products List: I-Varicella yeMpilo yokuQala , I-Varicella ixesha elide lokuViniseka kweMithi , I-Varicella ixesha elide lokuViniseka , I-Gelatin yeeMpilo yokuNqanda , I-Varicella Vaccine Live ephilileyo , I-Varicella Vaccine , Imveliso yokuBhalisa , I-Varicella Biotechnology I-Pox Pox